ဘန်ကောက် VTBD & VTBS လေဆိပ် DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 43.5 ကို MB
downloads ရယူရန္ 17 922
Author: KT-Designs ရှုခင်း (VTBD), Ray Smith က (VTBS)
ဤတွင်နှစ်ဦးရှုခင်းပါဝငျသော pack ကိုဘန်ကောက်သုဝဏ္ဏဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (VTBS) ဗားရှင်း 1.5 နှင့်ဒဏ္ဍာရီဒွန်မောင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ် (VTBD) ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေဆိပ်စသည်တို့ကိုဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, 3D အဆောက်အဦးများနှင့်အတူထည့်သွင်းကြသည်ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ရဲ့ရှုခင်းဘန်ကောက်မြို့သုဝဏ္ဏဘူမိ၏ရှုခင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးပြည့်ရှိပါတယ်သတိပြုပါ။
သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ် (rtgs: Suwannaphum; ထိုင်းအသံထွက်: [sù.wān.ná.pʰūːm]) (IATA: ဘန်ကောက်, ICAO: VTBS), လည်း (နယူး) ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဖြစ်လူသိများ, ဘန်ကောက်, ထိုင်းနိုင်ငံထမ်းဆောင်နှစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။ အခြားတစ်ဒွန်မောင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်သည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ 2,980 ဟက်တာ (7,400 ဧက) ၏စုစုပေါင်းဧရိယာအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုဝဏ္ဏဘူမိကိုတရားဝင် 15 စက်တင်ဘာလ 2006 အပေါ်ကန့်သတ်ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, 28 စက်တင်ဘာလ 2006 အပေါ်အများဆုံးပြည်တွင်းနှင့်အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါလေဆိပ်သည်လက်ရှိတွင်ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းအင်တာနေရှင်နယ်ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Orient ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းအတွက်အဓိကအချက်အချာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဒေသဆိုင်ရာတံခါးပေါက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံခြားလေကြောင်းလိုင်းများအဘို့ကိုဆက်သွယ်ထားသောအမှတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။
အဆိုပါလေဆိပ်မြို့တွင်းဘန်ကောက်မြို့ Samut Prakan, ပတ်သက်. 25 ကီလိုမီတာ (16 မိုင်) အရှေ့, ယခင်ကဘန် Phli အတွက် Racha Thewa အတွက် Nong Nguhao (Cobra ရွှံ့ညွန်ထဲက) အဖြစ်လူသိများခဲ့ရာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ (स्वर्णभूमि (IAST: Sanskrit ကနေSvarṇabhūmi, "ရွှေဝါပြည် ')) နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သုဝဏ္ဏဘူမိဘုရင်ဘူမိဘောအဒူလျာဒက်ကရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရွှေနိုငျငံတျောသညျကိုရည်ညွှန်းသည်အရှေ့တောင်အာရှရှိတစ်နေရာရာမှာတည်ရှိပြီးပြီမှ hypothesised ခဲ့သည်။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)
ဒွန်မောင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ် (ထိုင်း: ท่าอากาศยานดอนเมือง, IPA:: [dɔ̄ːn.mɯ̄ːaŋ], သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်ထိုင်းအဖြစ်: สนามบินดอนเมือง, IPA:: [sà.nǎːm.bīn.dɔ̄ːn.mɯ̄ːaŋ]) (IATA: DMK, ICAO: VTBD) (ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့မဟုတ်လည်း [ဟောင်း]) သာ. ကွီးမွတျဘန်ကောက်ထမ်းဆောင်နှစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တသုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ် ([နယူး] ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) (ဘန်ကောက်) ဖြစ်ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလေဆိပ်ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်အာရှရဲ့အသက်အကြီးဆုံးတဲ့ operating လေဆိပ်တယောက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။ ဒါကြောင့်အစောပိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာတရားဝင်, 27 မတ်လ 1914 အပေါ်တစ်ဦးတော်ဝင်ထိုင်းလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပျံသန်းမှုကြောင့်ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးစီးပွားဖြစ်လေဆိပ်တ်အောင်, 1924 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်လေယာဉ် KLM တော်ဝင်ဒတျချြလေကြောင်းလိုင်းကဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ပြုပြင်မှုများအပြီး 2006 မတ်လ 24 အပေါ်ပြန်ဖွင့်ရှေ့တော်၌, ဘန်ကောက်ရဲ့အသစ်သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ရဲ့အဖွင့်အောက်ပါ 2007 ခုနှစ်တွင်ပိတ်ခဲ့သည်။ သစ်လေဆိပ်ရဲ့အဖွင့်ကတည်းကဒါဟာဒေသတွင်းခရီးသည်လေယာဉ်အချက်အချာနှင့်က de facto တန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်းအချက်အချာဖြစ်လာသည်။ 2015 မှာ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလေဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်
ဒွန်မောင်းကြိုတင်၎င်း၏ပိတ်ပစ်ရန် Asia ၏အရေးပါသောအချက်အချာနှင့်ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း International ၏အချက်အချာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာ, က 80 လေကြောင်းလိုင်းများ 160,000 ပျံသန်း operating နှင့် 38 အတွက်ကုန်တင်ကုန်ချ၏သန်း 700,000 ကျော်ခရီးသည်နှင့် 2004 တန်ချိန်ကိုင်တွယ်နှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်အတွက်လေကြောင်းအသွားအလာ [ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်] အများဆုံးဝတ်ပြုကြ၏။ ထို့နောက်ခရီးသည်အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်အာရှတိုက်အတွင်းကမ္ဘာနှင့် 14nd အတွက် 2th အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ဒွန်မောင်း Nok Air လေကြောင်းလိုင်း, ထိုင်းအဲအေး, ထိုင်းခြင်္သေ့ Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Orient ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းအတွက်အဓိကအချက်အချာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)